Plasma Kubva Kune Vanhu Vakapora kubva kuCOVID-19 Inogona Kubatsira Varwere Vazvino |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Plasma Kubva Kune Vanhu Vakapora kubva kuCOVID-19 Inogona Kubatsira Varwere Vazvino
Kuwedzerwa kweplasma yeropa yakapihwa nevanhu vakatopora kubva kuhutachiona hwehutachiona kunogona kubatsira vamwe varwere vari muchipatara neCCIDID-19, chidzidzo chitsva chepasi rose chinoratidza.
Kurapa uku, kunozivikanwa seconvalescent plasma, kuchiri kutorwa sekuyedza neUS Food and Drug Administration (FDA). Plasma ine masoja ekudzivirira chirwere, mapuroteni eropa ayo ari chikamu chemuviri wemuviri. Yakaumbwa kuitira kuti vakwanise kubatirira kuhutachiona hunokonzera COVID-19, SARS-CoV-2, masoja ekudzivirira chirwere anopenya uye anomake kuti abviswe mumuviri, vaongorori vanodaro.
Ichitungamirwa nevatsvagiri veNYU Grossman Chikoro cheMishonga, chidzidzo ichi chakaratidza kuti pakati pevarume nevakadzi zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi mana nevamwechete, avo vakawana jekiseni reconvalescent plasma nguva pfupi yadarika mushure mekurapwa vaive nechikamu gumi neshanu muzana mukana wekufa mukati memwedzi kubva kuCOVID-2,341 pane avo vasina. gamuchira convalescent plasma kana avo vakagamuchira isingashande saline placebo.
Zvakanyanya, vaongorori vakawana kuti mabhenefiti makuru ekurapa aive pakati pevarwere vari panjodzi yekunetseka zvakanyanya nekuda kwemamiriro akange aripo, akadai seshuga kana chirwere chemoyo. Kurapa, uko kune masoja ekudzivirira chirwere uye mamwe masoja ekudzivirira chirwere anodiwa kurwisa hutachiona, anoita seanobatsira avo vane rudzi A kana AB ropa.
Izvozvi zvakawanikwa pakudzidza, zvakaburitswa mujenari JAMA Network Vhura online Ndira 25, zvinobva mukubatanidzwa kweruzivo rwevarwere kubva kuzvidzidzo zvisere zvichangopedzwa muUnited States, Belgium, Brazil, India, Netherlands, neSpain pamusoro pemhedzisiro yekupora. plasma yeCOVID-19.
Aya mabhenefiti ekurapwa angangove akajeka sezvo data rakawanda kubva kumiedzo riri kuwanikwa, anodaro Troxel, purofesa muDhipatimendi rePopulation Health paNYU Langone. Izvi zvinodaro nekuti data kubva kuzviyedzo zvega idiki zvakanyanya kuratidza maitiro ekurapa pazvikamu zvevarwere, anodaro. Zvimwe zvidzidzo zvega zvega zvakaratidza kurapa kwacho kusashanda kana kweukoshi hushoma.
Muongorori-muongorori Eva Petkova, PhD, anoti timu iri kushandisa data rayo rekudzidza kugadzira hurongwa hwezvibodzwa zvevanotsanangura murwere, kusanganisira zera, danho reCOVID-19, uye zvirwere zviripo, zvichiita kuti zvive nyore kuti varapi vaverenge kuti ndiani akamira. kubatsira zvakanyanya kubva pakushandisa convalescent plasma.
Pachidzidzo ichi, vaongorori vakaisa ruzivo rwese rwevarwere kubva kudiki, rakasiyana ongororo yekiriniki nezve convalescent plasma therapy, kusanganisira miedzo kuNYU Langone, Albert Einstein College of Medicine uye Montefiore Medical Center, Zuckerberg San Francisco General Hospital, uye University of Pennsylvania muPhiladelphia. Vatsvagiri vaitarisira chero mabhenefiti kana kukanganisa mukurapwa kwaizove nyore kuona pakati peiyo yakakura kwazvo sampu yevarwere. Miedzo yese yaive yakasarudzika uye yakadzorwa, zvichireva kuti murwere aive nemukana wakasarudzika wekupihwa kugamuchira convalescent plasma kana kusaigamuchira.
Inosanganisirwa muongororo iyi yaive data kubva kune imwe multicenter US chidzidzo chakaburitswa zvakasiyana muna Zvita 2021 muJAMA Internal Medicine. Chidzidzo ichocho muvarwere 941 vakaiswa muchipatara neCCIDID-19 chakaratidza kuti varwere vanowana madhasi epamusoro econvalescent plasma therapy uye kwete pamimwe mishonga, senge remdesivir kana corticosteroids, vangangobatsirwa kubva mukurapwa kweplasma. Anodzidza co-primary investigator Mila Ortigoza, MD, PhD, mubatsiri purofesa muDhipatimendi reMishonga neMicrobiology paNYU Langone, anoti mhedzisiro yekutanga iyi yakatsigira pfungwa yekuti convalescent plasma inogona kuve nzira yekurapa inokwanisika, kunyanya kana mamwe marapiro asati asvika. iripo, sepakutanga kwedenda.
Pamusoro pezvo, convalescent plasma yakaunganidzwa kubva kune vaimbotapukirwa uye vakazobaiwa vanopa (VaxPlasma) yaizove nemasoja ekudzivirira chirwere muhuwandu hwakakwana uye nekusiyana-siyana kunogona kupa dziviriro yakawedzerwa kubva kuhutachiwana huri kubuda, anodaro Ortigoza. Mavhairasi anowanzo chinja genetically (tora zvisina kujairika shanduko muDNA kana maRNA macode) mukati mekufamba kwedenda. Nechikonzero ichi, convalescent plasma ine mukana wekupa kurapa kunoshanda nekukurumidza mushure mekuchinja kwakadaro pane mhando dzekurapa dzinowanzoita kushomeka nekufamba kwenguva uye dzinofanirwa kuita re-design process kugadzirisa imwe mutsauko mutsva, senge monoclonal antibody marapirwo.
Covid-19 DNA Zvinodhaka Zvokudya uye Drug Administration utano mushonga Pennsylvania San Francisco Speini
Mafashamo 'asati amboitika' anouraya vanhu mazana matatu nemakumi mana nerimwe muSouth Africa